Lehilahy iray no maty voadonan’ny fiara ny alahady 17 novambra 2019, tao Andranomanelatra-Antsirabe II, tokony ho tany amin’ny 8 ora sy sasany alina. Teo amin’ny toerana tsy lavitry ny Garan-damasinina teo aloha no voafaokan’ny fiara ity lehilahy ity, raha ny angom-baovao ihany. Nambaran’ireo manodidina fa ny firefotry ny fifandonana no nanaitra ny nanodidina ka nivoahan’izy ireo ny trano, no nahitana ity lehilahy voadona ity, izay maty tsy tra-drano avy hatrany. Nirifatra nanohy ny diany ilay fiara nandona fa tsy nijanona, ny andro rahateo efa maizina. Ny mpitandro filaminana tonga nijery ny loza no nahafantarana fa mponina avy any amin’ny Fokontany Ambolotsararano, Kaominina Andranomanelatra ity lehilahy ity, ary nikasa hody izy izao voadonan’ny fiara izao. Misokatra ny fanadihadiana, saingy mahakely finoana ny mety ahitana izay nahavanon-doza.
lundi, 18 novembre 2019 09:06
Sary fampihaingoana nindramina
Oniversite Antsiranana: Hitokona ny SECES manomboka ny alatsinainy 18 novambra
Nanapa-kevitra ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mambra ny SECES sampana Antsiranana, nandritra ny fivoriambe nataon’izy ireo ny 15 novambra 2019, fa hampiato ny asa pedagojika rehetra manomboka ny alatsinainy 18 novambra 2019. Ny tsy fisian’ny vahaolana manoloana ny fitakiana ireo ora fanampiny sy fitakiana ataon’ireo namany ao amin’ny SECES Antananarivo no voalaza fa antony.
lundi, 18 novembre 2019 09:02
Nosy Malagasy: Maniry ny handefasana mivantana amin’ny TVM ny dinika eny Andafiavaratra ny maro
Hanomboka anio eny amin’ny Lapan’Andafiavaratra ny asan’ny vaomiera iombonan’i Madagasikara sy Frantsa hamolavola ny drafitra hamerenana ireo Nosy Malagasy amin’i Madagasikara, ho fampiharana ny fanapahana noraisina teo anivon’ny Firenena Mikambana tamin’ny 1979. Maniry ny handefasana mivantana amin’ny TVM ny dinika eny Andafiavaratra ny Malagasy maro, hisian’ny mangarahara. Manentana ny Malagasy, indrindra ireo monina manodidina ny toerana hisian’ny fivoriana, ny ministeran’ny fiarovam-pirenena mba hanangana Sainam-pirenena malagasy.
Tombanana eo amin’ny 24 000 m3 ny filan'ny mponina Antsiranana amin’ny rano fisotro madio ankehitriny. 18 000m3 ihany anefa ny tolotra afaka omen’ny Jirama, noho ny fahanteran’ny foto-drafitrasa eto Maromaniry. Tamin’ny taona 1925 no nanorenana ny foibe famokarana rano eto an-toerana, ary 30 taona lasa izay, tamin’ny taona 1989 no nisy fanavaozana farany.
Namela takaitra teo amin’ny Brigadin’ny Zandarimaria Antsakabary, Distrikan’i Befandriana-Avaratra ny rivotra nifofofofo niseho teto an-toerana. Fanorenana foto-drafitrasa vaovao no heverina hanoloana ny simba.
dimanche, 17 novembre 2019 09:04
Isoanala - Betroka: Tovovavy 16 taona nisy naka ankeriny
Nitrangana fakana an-keriny tao Antanambao, Kaominina Isoanala, Distrikan’i Betroka ny 15 novambra 2019 teo. Tovovavy iray, fantatra amin’ny anarana hoe : Erica, 16 taona, no lasibatra tamin’izany. Nitondra basim-borona ireo olon-dratsy. Nanao fanarahan-dia ny zandary vao nahazo fampandrenesana. Navotsotr’ireo mpaka ankeriny ilay tovovavy rehefa nadoa 2 300 000 Ariary tamin’ireo dahalo ny havany ho tambin’ny famotsorana azy. Mbola manohy ny fikarohana ireo dahalo ny Zandary.
Nanokatra fanadihadiana ny Bianco Mahajanga rehefa naharay fitorohana mikasika fisolokiana sy tsindry nataona zandary iray miasa ao Maintirano. Natolotra ny Fampanoavana tao amin’ny Fitsarana Ambaratonga voalohany Maintirano ny raharaha ny 14 novambra 2019 teo. Notanana am-ponja vonjimaika ilay zandary taorian’izay. Amin’ny 25 novambra 2019 ny Fitsarana azy. Miisa 71 izao ireo zandary voatazona am-ponja hatramin’ny fiandohan’ny volana febroary 2019 noho ny fandikan-dalàna sy fandikana fitsipi-pifehezana, izay nanomezan'ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, ny Jeneraly Richard Ravalomanana alalana hatrany, hampanenjehana ireo izay mihoam-pefy.
samedi, 16 novembre 2019 10:21
Miandrivazo: Miaramila mamo nandratra ny miaramila namany tamin’ny basy teny an-tanany
Tao Besomaty, Kaominina Manandaza, Distrikan’i Miandrivazo no niseho ity loza ity ny 13 novambra teo. Miaramila kaporaly manatevina ZRPS Bravo, mamita iraka momba ny tsy fandriampahalemana amin’iny faritr’i Betsiriry iny no namoa-doza noho ny toaka nosotroiny. Niantefa tamin’ny fen’ilay miaramila, kaporaly namany, ny bala ary gorobaka ny fen’ity farany. Nalefa notsaboina avy hatrany ao amin’ny Hopitaly miaramila Soavinandriana – Antananarivo ny maratra. Miandry ny fanomezan-dalan’ireo lehibe mpifehy isan’ambaratonga ny fanokafana fanadihadiana ity tranga ity.
Nirehitra ny trano fivorian'ny miaramila eny Iavoloha ny harivan'ny alakamisy 14 novambra 2019. « Noho ny andro ratsy sy ny kotro-baratra », izay niteraka « fipoahan'ny herinaratra (court circuit) no nahatonga ny firehetan'ny trano », araka ny fanambarana nataon’ny serasera sy fifandraisana eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika. « Trano eo ivelan'ny faritry ny Lapam-panjakana Iavoloha no nirehitra ». « Tsy voakasika izany velively ny Lapam-panjakana Iavoloha sy ny faritrala manodidina », hoy hatrany ny fanambarana. Tonga teny an-toerana ny mpamono afo sy ireo miaramila miara misalahy namono ny afo. (Jereo Sary Tohiny)
Page 5 sur 490